*INdawo yabaThengisi* ibekwe kufutshane ne-GAP trail!
Wamkelekile kwiNdawo yabathengisi! Ifumaneka eVan Meter, PA kunye nenxalenye yeSouth Yard Depot kanye ecaleni kwendlela yeGAP. Apha wena kunye neqela labahlobo okanye usapho linokonwabela ukuphumla okuphangaleleyo kwikhitshi lethu elitsha elihlaziyiweyo okanye ngelixa uzisonge esofeni. Eli gumbi lokulala li-2 ligumbi lokuhlambela elinye likhulu ngokwaneleyo ukuba lingalingana nabantu abayi-3-6 ngokukhululeka (kuphela ukuba abanye balungile ngokulala kwiisofa). Uya kuba nokufikelela ngokuthe ngqo kumzila kunye nenkundla yebhasikithi. Sijonge phambili ekubambeni ii-yin's!
Nangona iyitreyila, ndiyakuthembisa ukuba iye yaphuculwa ngaphezu nje kwegazi lethu, ukubila, kunye neenyembezi. Nathi njengosapho sibeke inyameko enkulu yothando kuyo ngokunjalo. Besifuna ukuba ivakale njengekhaya kuba siyayiqonda indlela ekubaluleke ngayo oko.
Sisebenza ekuphuculeni yonke imihla ngokunjalo.
Yintoni eyenza indawo yethu ibe yodwa yindawo. Sibekwe kwindawo yokuphumla kwaye ezolile kakhulu. Awuyi kuva ingxolo eninzi ngaphandle kokuba nguloliwe oqengqelekayo kwiziporo eziwela umlambo.
Indawo yethu ikufuphi neyethu iDepho yaseMazantsi yeYadi. Apha unokufunda imbali yedolophu kwaye uphumle kwaye ubambe intwana yokutya okanye into eselwayo. Ngalo lonke ixesha ukonwabela igadi okanye umbono womzila!
Sikwabonelela ngeerenti zeebhayisekile kwiindwendwe zethu. Nceda undazise kwangaphambili kwaye singenza isivumelwano.
Sonke sisonke sincokola neendwendwe zethu. Unxibelelwano lubaluleke kakhulu kuthi ke ukuba unayo nayiphi na imiba ngexesha lokuhlala kwakho nceda ungathandabuzi ukufikelela kuthi. Indawo yethu yokuhlala ingaphaya kwendlela kwaye umntu uhlala ekhona ukuze asincede.
Sonke sisonke sincokola neendwendwe zethu. Unxibelelwano lubaluleke kakhulu kuthi ke ukuba unayo nayiphi na imiba ngexesha lokuhlala kwakho nceda ungathandabuzi ukufikelela kuthi.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Van Meter